Taliska Booliska oo sheegay in heegan la geliyay Ciidanka sugaya Amniga doorashada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed ( Xijaar) ayaa markale sheegay in dowladda Soomaaliya ay heegan buuxa gelisay Ciidamadii ka qyeb qaadan lahaa sugida Amniga doorashooyinka.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray I nay u diyaar garoobeen doorashada heshiiska laga gaaray ee dhawaan ka bilaabaneeysa dalka, isla markaana ay ay dhamaan diyaariyeen Ciidamadii ka qeyb qaadan lahaa.
Ugu dambeyn Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed waxaa uu sheegay in Ciidamo horleh ay kusoo biireen Booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo ka qeyb qaadan doono guud ahaan sugida amniga dalka.
Hadalka Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed ( Xijaar) ayaa ayaa kusoo aadayaa xilli howaha sugida amniga doorashooyinka lagu wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble, isla markaana Xukuumadda Soomaaliya ay wado diyaar garoowgii ugu dambeeyay.